WWE ၏ လက်ရှိ အခြေအနေအကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်းနှင့် WWE ပွဲ TV Show များ စုစည်းမှု - အမျိုးကောင်းသား
Home » Movie » WWE » WWE ၏ လက်ရှိ အခြေအနေအကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်းနှင့် WWE ပွဲ TV Show များ စုစည်းမှု
WWE ၏ လက်ရှိ အခြေအနေအကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်းနှင့် WWE ပွဲ TV Show များ စုစည်းမှု
ကျွန်တော်တို့ WWE SmarKDown တို့ RAW တို့ ဆိုတာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြည့်ဖူးမြင်ဖူးကြပါတယ်.. Game များ မှာလည်း ပျော်ရွှင်နှစ်ခြိုက်စွာ ဆော့ကစားဖူးကြပါတယ်..
တချို့လည်း မသိသေးတဲ့ သူများ | WWE နဲ့ အလှမ်းဝေးနေပြီး အခု လက်ရှိ အခြေ အနေများကို မသိသေးတဲ့ သူများကို | အပတ် စဉ် မကြည့်ဖြစ်တဲ့ သူများကို WWE ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို အကျဉ်းချုံ့ ဖော်ပြပေးပြီး ယခင် January လ ရဲ့ TV Series ပေါင်း ချုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
WWE ဆိုတာက ဘာလဲ ?
WWE ဆိုတာက World Wrestling Entertainment ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်..
၄င်း WWE ဟာ Wrestling ပုံစံ တိုက်ခိုက်ရတဲ့ ပွဲတွေကို ကျင်းပ ဖော်ပြပေးတဲ့ Company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...
၄င်း Company ကို Toots Mondt နဲ့ Jess McMahon တို့ နှစ်ယောက် January 7, 1952 မှာ တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ CEO ကတော့ Vince McMahon ဖြစ်ပါတယ်..
၄င်း WWE Company ကနေ WWE, WCW, ECW, AWA, WCCW စတဲ့ Titles တွေ အလိုက် Wrestling ပွဲတွေ ထုတ်လွှင်ပြသ ကျင်းပ ပေးပါတယ်...
Wrestling ပုံစံ တိုက်ခိုက်တဲ့ Entertainment ကို WWE Company တစ်ခုထဲကပဲ ကျင်းပတာ မဟုတ်ပါဘူး.. iMPACT အစရှိတဲ့ Company ကလည်း Wrestling ပုံစံ တိုက်ပွဲများကို ကျင်းပ ပေးထားပါသေးတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့ Company တွေဟာ Management မကောင်းတဲ့ အတွက် WWE လောက် အောင်မြင်မှု မရ ခဲ့ကြပါဘူး..
WWE Company ဟာ RAW , Smack Down, WWE Main Event, WWE Superstars, WWE Total Divas ဆိုပြီး နာမည် များနဲ့ ကျင်းပ ဖျော်ဖြေ ပေးပါတယ်...
အပတ်စဉ် Monday Night (တနင်္လာနေ့ည) မှာ RAW ကျင်းပပြီး.. Friday Night (သောကြာနေ့ည) မှာ Smack Downကို ကျင်ပ ပါတယ်.. WWE Main Event များကို ရံဖန်ရံခါ Wednesday နေ့ များမှာ ကျင်ပလေ့ ရှိပြီး.. Superstars များဟာ တိုက်ပွဲမဟုတ်တော့ပဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူများ အထဲမှ WWE Universe(ပွဲ ကြည့် ပရိတ်သတ်) က ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ သူများဖြစ်ပါတယ်.. WWE Total Divas ဟာ အမျိုးသမီးများ သာ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ပွဲ ဖြစ်ပြီး Monday Night နဲ့ Friday Night တို့မှာ ကြားညှပ် ယှဉ်ပြိုင်လေ့ ရှိပါတယ်... ပွဲကြီး| ပွဲကောင်းများ Main Event အကြီးစားများကိုတော့ Saturday, Sunday တို့မှာ ယှဉ်ပြိုင်လေ့ ရှိပါတယ်..
WWE Total Divas ရဲ့ လက်ရှိ Divas ချန်ပီယံ ကတော့ အမျိုးသမီး Superstar - AJ Lee ဖြစ်ပါတယ်..
အခုလက်ရှိ အမျိုးသမီး Divas ချန်ပီယံလိုပဲ အမျိုးသား ချန်ပီယံကတော့ Randy Orton
ပါ.. သူက ရတောင့် ရခဲ ဖြစ်တဲ့ WWE ရော, World Heavy Weight Champion ခါးပတ် နှစ်ခု စလုံးကို လက်ရှိပိ်ုင်ဆိုင်ထာသူဖြစ်ပါတယ်..
၄င်း Randy Orton ဟာ John Cena ဆီကနေ World Heavy Weight Champion ခါးပတ်ကို ရယူထားပြီး ခါးပတ် ၂ ခု ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်..
တကယ်တော့ Randy Orton ဟာ Triple H ရဲ့ တပည့်ဆိုလဲ မမှားပါဘူး.. Triple H ဟာ အခု လက်ရှိမှာ COO [Chief Operating Officer] ဖြစ်နေတာ မို့ သူ့ တပည့် Randy Orton ကို ခါးပတ်ရအောင် Triple H ရဲ့ ဇနီး Stephanie McMahon ကလည်း အားပေးနေတာမို့ အခု လက်ရှိမှာ Champion ဖြစ်နေပါတယ်..
Triple H ဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ COO ဖြစ်နေတာကိုတော့ မေးစရာ မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်.. Stephanie McMahon ကို လက်ထပ်လိုက်မှတော့ McMahon မျိုးဆက်ကထောင်ထားတဲ့ WWE Company မှာ နေရာရလာတာ မဆန်းပါဘူး..
Randy Ortan ခါးပတ်ရတဲ့ History ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် Triple H ဟာ ညစ်ပတ်ပြီး ရယူပေးခဲ့တာ များပါတယ်.. Randy Orton မှာ ခါးပတ်ရနိုင်တဲ့ အရည်း အချင်း ပြည့်မီဖို့ အများကြီး လိုအပ်ပါသေးတယ်.
Randy Orton ရဲ့ အဓိက ရန်ငြိုးထား ပြိုင်ဖက် ကတော့ John Cena လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ.... တစ်ခါလာလဲ John Cena နဲ့ ပဲ ပြဿနာ ဖြစ်ရတာ ဖြစ်ပြီး 2007 မှာ တစ်ကြိမ်.. 2014 မှာ. တစ်ကြိမ် John Cena ရဲ့ အဖေ (John Cena Sr.) ကိုတောင် Randy Orton က တိုက်ခိုက် ရိုက်ချိုးခဲ့သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ WWE company ရဲ့ COO ဖြစ်တဲ့ Triple H က Randy Orton အပေါ် ဘာမှ အထွေအထူး အရေးယူ ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး.. John Cena သာ လွှတ်ပေးပြီး ပြန်လည်တိုက်ခိုက် ခဲ့တဲ့ အတွက် Randy Orton ဟာ ထွက်ပြေးသွားပြီး လွတ်မြောက်သွားပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ အခု 2014 Royal Rumble ပွဲမှာ John Cena နဲ့ Randy Orton တို့ကို WWE World Heavy Weight Championship ပွဲ ကျင်းပပြီး ယှဉ်ပြိုင်စေပေမဲ့ The Wyatt Family က Randy Orton ရှုံးလု ဖြစ်နေစဉ်မှာ လာရောက်ပြီး John Cena ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမို့ Randy Orton ကသာ အနိုင်ရ ခဲ့ပြီး အခု လက်ရှိ January 2014 အထိ WWE ခါးပတ်ရော World Heavyweight Champion ခါးပတ်ရော ရယူထားဆဲ ပဲဖြစ်ပါတယ်..
သို့ပေမဲ့ မကြာခင် ကျင်းပမဲ့ 2014 Elimination Chamber ပွဲမှာ Randy Orton က John Cena , Daniel Bryan , Sheamus , Antonio Cesaro နဲ့ Christian6ဦးတို့ ယှဉ်ပြိုင်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
၂၀၁၄ February 24 လတွင် ကျင်းပမည့် Elimination Chamber တွင် ပါဝင်မည့်သူများ..
၄င်း လှောင်ချိုင့်ပွဲ နိုင်တဲ့ သူဟာ Wrestle Mania မှာ 2014 30 Man Royal Rumble Winner - Batista နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
2014 Royal Rumble Winner - Batista - Royal Rumble ပွဲတွင် အောင်နိုင်ပြီး အောင်ပွဲ ခံနေစဉ်
ဒါကြောင့်မို့ ပွဲကြီး ပွဲကောင်းတွေကို ဆက်ပြီး လာဦးမှာ ဖြစ်လို့ စောင့် ကြည့် ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
WWE ဟာ တိုက်ခိုက်ပွဲ ဖြစ်ပေမဲ့ ဘာကြောင့် လူကြိုက်များ အောင်မြင်နေရတာလဲ သင်သိပါသလား ??
သူဟာ ဘောလုံးပွဲလိုပဲ ဖြစ်ပြီး Mission တစ်ခုခုပြီး တစ်ခု ဖြတ်သန်း နေလို့ ပါ.. ဘောလုံးပွဲများဟာ Champion ဖလားကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး လုရသလို ပါပဲ.. နှစ်စဉ်.. စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ရာများနဲ့ Event များပါဝင်ပါတယ်.. သာမန် ကြည့်တဲ့ သူများဟာ လက်ဖြန်နဲ့ ရိုက် | တံတောင်နဲ့ ထောင်း| ညစ် | ခြေနှင့်ကန် | Smack သုံး စသည်တို့သာ မြင်ရပေမဲ့ အဲ့လို ထူးဆန်းသော Wresteling တိုက်ခိုက်ခြင်းများကို သေချာ ကြည့်လျှင် နှစ်စ မှ နှစ်ဆုံး အထိ Event များ နဲ့ လာပါတယ်..
01) Royal Rumble >>30 Man ဖြစ်ပြီး စင် ပေါ်မှ တွန်းချရသောပွဲ
02) Elimination Chamber >> လှောင်ချိုင့်တွင်းတိုက်ခိုက်ပွဲ
03) WrestleMania >> WWE ရဲ့ Main Event များနှင့် ကမ္ဘာ အကြီးဆုံး ဖျော်ဖြေသောပွဲ
04) Extreme Rules >> အပြင်းအထန် တိုက်ပွဲ
05) WWE Payback >> အကျေပွဲ
06) Money in the Bank >> ပိုက်ဆံသေတ္တာပုံးကို တွဲလောင်းချထားသည်ကို လုရသောပွဲ
07) SummerSlam >>
08) Night of Champions >> Champion တို့ အချင်းချင်း တိုက်ပွဲ
09) WWE Battleground >>
10) WWE Hell inaCell >> Cell ထဲမှာ ချင်တဲ့ ပွဲ
11) Survivor Series >>
12) WWE TLC: Tables, Ladders & Chairs >> စားပွဲ | ကုလားထိုင် | လှေကားတို့သုံးပြီး ချတဲ့ ပွဲ ဖြစ်
စသည်ဖြင့် တစ်နှစ်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် Event ပေါင်း ၁၂ ခု နဲ့ လည်ပတ်နေပါတယ်... ဒါကြောင့် အဲ့ဒီလို လည်ပတ်နေတဲ့ အတွက် WWE ဟာ အောင်မြင် နေတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်... ၄င်း ပွဲကြီးပွဲကောင်းများကိုတော့ Sunday , Saturday တို့မှာ ယှဉ်ပြိုင် စေလေ့ ရှိပါတယ်.. ၄င်း Main Event များဟာ No Disqualification များ ဖြစ်ကြပြီး Qualify ဖြစ်မဖြစ်သတ်မှတ် မထားပါဘူး.. အားလုံး ၀င်ရောက် ဆော်ကြ တီးကြတဲ့ ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်..
အဲ့ဒီလို Event Day တွေ ရှိပြီ ဆိုရင် WWE ပွဲကို ကြည့်တဲ့သူ အရေ အတွက် ဟာ သာမန်ထက် ၂ ဆ ၃ ဆ လောက် များပြီး American ရဲ့ Watch List တွေရဲ့ ထိတ်ဆုံးမှာ အမြဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်...
သင့် အနေနဲ့ လည်း ပွဲ ကြီး | ပွဲကောင်းများကို လက်လွတ် မခံ ရအောင် ကျွန်တော်တို့ ShweMOOVi ကလည်း တစ်ဆင့် ပြန်လည် အပတ်စဉ် နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
သင့် အနေနဲ့ WWE TV Show များကို စိတ်ဝင်စားလို့ ကြည့်ချင်ပါက ပွဲကြီး ပွဲကောင်းများနဲ့ Event တော်တော် များများကို ShweMOOVi မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.. နောက်လဲ တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. အောက်မှာ ကြိုက်တာကို ကြည့်ပြီး ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်.. အခု လက်ရှိ ဒေါင်းသမား အများဆုံးကိတော့ Royal Rumble Part2ပါ... Batista ပြန်ရောက်လာပြီး 30 Man Royal Rumble မှာ နိုင်တဲ့ ပွဲ သီးသန့်ပါ.. 30 Man ကတော့ သိမယ် ထင်ပါတယ်.. အောက်ကို ဆွဲတွန်းရတာပါ.. Royal Rumble Part 1 မှာတော့ Brock Lesnar Vs Big Show , Randy Ortan Vs John Cena, စတဲ့ ပွဲတွေ ပါပါတယ်.. အောက်မှာ နှစ် သက်ရာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်..
::DOWNLOAD PORTION For WWE Series::
WWE Event Name
Friday Night SmackDown Download 2014/01/10
Monday Night Raw Download 2014/01/13
WWE Main Event Download 2014/01/15
Friday Night SmackDown Download 2014/01/17
Monday Night Raw Download 2014/01/20
*Royal Rumble 2014* Download 2014/01/26 (Sunday)
Monday Night Raw Download 2014/01/27
Friday Night SmackDown Download 2014/01/31
[Download Link ကို နှိပ်ကြည့်၍ Download Link ကျ မလာလျှင် Right Click ဖြင့် Open In New Tap ဖွင့်ကာ Download ပြုလုပ်ဖို့ မမေ့ရန် သတိပေးအပ်ပါသည်။]
ပြန်လည်တင်ပြသူ Steel Jelly အချိန် 6:59:00 AM
ခေါင်းစဉ် Movie, WWE
ye zaw Htun February 2, 2014 at 11:27 AM
Thank so much. I like WWE. Upload next next episode. So So like this page
Zapya v2.2 ZH apk for Android 2MB
2NE1 – CRUSH(2014)[2nd Album]MP3-320kbps
Clean Master v5.0.0.1914 apk for Android
Y.M.A - ပြား ၉၀(2014)[Album]MP3-128+320Kbps
facebook မှာဘယ်သူကကိုယ့်ကို Unfriend လုပ်ထားလဲပြပေ...
Download Adult World (2013) HDRip XViD ShweMOOVi.c...
[Restricted 18+ Only] Penthouse USA - March 2014 [...
[18+ Only]Nuts UK - HELEN'S Sexy New Look ! + All ...
မာစတာ သင်္ကြန် 2014 mp3 The Whole Album [39MB]
After the Dark (2013) 720p MP4 800MB
VA - Master Thingyan(မာစတာသင်္ကြန်(2014)[Album]MP3-1...
ဓမ္မပဒ v 1.1 apk for Android
Videoder (One Click Video Downloader) v5.2 apk for...
Panecal (Scientific Calculator) 5.0.1 apk for Andr...
VA - Pop Princesses 4(2014)[Album]MP3-320Kbps
CALCU: The Ultimate Calculator v1.0.1.022014 Apk
WiFi Pass Recovery & Backup Paid v3.6 Apk 617KB
Camera360 Ultimate v5.0 beta 1 Apk 16MB
Myanmar Sexy Models v1.0 for Android
HD wallpaper အလန်းများစုစည်းထားမှု for IOS & Andro...
Barrel Roll ထက်လန်းတဲ့ Cylinder ဆိုတဲ့ tweak
BIGBANG – Bigbang Early Best (Korea Edition)(2014)...
Sydney Leigh - Crazy Beautiful EP(2014)[Album]MP3-...
ဆိုတေး - မင်္ဂလာပါ(2014)[Album]MP3-192kbps
Alyssa Reid - Time Bomb(2014)[Album]MP3-320kbps
Westlife - Westlife - The Lovesongs(2014)[Album]MP...
VA - 9' Night (2014)[Album]MP3-128kbps
Download Sex Drive 2008 720p BluRayx264.ShweMOOVi....
Download Reasonable Doubt (2014) HDRiP XViD-ShweMO...
Download Candy Crush Saga v1.23.0 [Mod Unlimited L...
Download Zombie တွေကို ကားနဲ့ တိုက်ရမဲ့ Monster Da...
MKTO – MKTO (2014)[Album]MP3-320kbps
Download Escape The Titanic ဦးနှောက်သုံးပြီး လွတ်...
Download Marvel Run Jump Smash! v1.0.1 [PREMIUM] [...
Recycle - ဘဝရဲ့ဇာတ်ခုံ(2014)[Album]MP3-128kbps
Download Microsoft Office 2010 Professional Plusx8...
[18+ Only] Nuts UK - Beautiful Babes One Serious H...
[Restricted 18+ Only] Nuts UK - Exclusive Celebrit...
[18+ Only] Playboy Special Collector’s Edition Gir...
Elizabeth Rose – Elizabeth Rose(EP)(2014)[Album]MP...
VA - ချစ်ခြင်းရှိရာ(2014)[Album]MP3128kbps
VA - Love is you (အချစ်ကမင်း)(2014) [Album]128kbps...
UK ၏ Top 40 သီချင်းများ စုစည်းမှု [Android|Pc သမား...
Download Justice League War 2014 HDRip XviD MP3-Sh...
[Restricted Post 18+ only]Download Playboy Special...
Download Marvels Agents of S.H.I.E.L.D 2014 HDTV S...
Download Welcome to the Jungle 2013 720p BluRayx26...
Download Epic 2013 720p BluRayx264-ShweMOOVi.mp4[8...
သားကြီး - ပီယဆေး (2014) (Album)320Kbps
Natalia Damini - Beautiful (2014 )(Album)256Kbps
Rain (Bi) – Rain Effect (VOL. 6) (2014) (Album)
Ornagai v2.1.7 apk for Android ( 5MB )
WWE ၏ လက်ရှိ အခြေအနေအကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်းနှင့်...
သူရဇ္ဇ မဂ္ဂဇင်း 2014 .1 လ ပိုင်း
App Master (uninstall master) v4.3 apk for Android...
Stellar Phoenix Photo Recovery 6.0.0.1 For Pc(10M...